» Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee BF oo Qorshe Cajiib ah u gaaray Magaalada Baladweyne
Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee BF oo Qorshe Cajiib ah u gaaray Magaalada Baladweyne
Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan,halkaasi oo ay waqtigooda fasaxa kula qaadanayaan bulshada ay ku matalaan dowladda Soomaaliya.
Soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa gaaray xarunta maamulka Gobolka Hiiraan halkaasi oo ay kula kulmeen odayaasha , waxgaradka iyo xubnaha maamulka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne.
Qaarka mid ah odayaasha gobolka ayaa xildhibaanada labada aqal u sheegay waxyaabaha ay ka filayaan muddada ay magaalada Joogaan.
Isu duwaha caafimaadka ee gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladaha dhanka caafimaadka ee ka jirta magaalada Beledweyne, wuxuuna sheegay in caruur badan ay la il daran yihiin cuduro kala duwan oo u baahan in wax laga qabto.
Ugu dambeyn senetarada aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka ayaa u mahadceliyay bulshada iyo maamulka degmada Beledweyne sida ay usoo dhaweeyeen, waxayna sheegeen waxyaabaha ay qaban doonaan mudada ay magaalada Joogaan.
Mudada ay Xildhibanaada joogaan magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxay la kulmi doonaan Bulshada qeybahooda kala duwan ee Mas’uuliyiinta Gobolka iyo kan degmada Baladweyne.